"Ghost" tratra tamin'ny CCTV nanosika labiera tena tsara
Home Subgenres mahatsiravinaparanormal “Ghost” tratra tao amin'ny CCTV nanosika labiera tena tsara
“Ghost” tratra tao amin'ny CCTV nanosika labiera tena tsara
Iza no handoa izany?
by Timothy Rawles Novambra 24, 2021
by Timothy Rawles Novambra 24, 2021 75,881 hevitra
Tolakandro mahazatra fotsiny tamin'ny pub anglisy taloha mandra-pahatongan'ny olona iray na zavatra nanapa-kevitra ny hanimba ny fotoana.
Ao Hendon, Sunderland, ny Blue Pub dia niasa nandritra ny 167 taona. Midika izany fa maro ny olona nandalo teo amin'ny varavarany ary angamba ny sasany tsy niala.
Ny lahatsary eto ambany dia mampiseho lehilahy iray ao amin'ny trano fisotroana miresaka amin'ny mpiasa sasany amin'ny pub; labiera mangatsiaka eo anilany. Rehefa afaka kelikely, dia nisy zavatra tena hafahafa nitranga: ny labiera dia nitsambikina tamin'ny santimetatra vitsivitsy teo amin'ny bar, avy eo nianjera, nandraraka ny tao anatiny rehetra teo am-pofoany sy tamin'ny tany.
Tratra tamin’ny fakan-tsary ny zava-drehetra ary araka ny fihetsiky ny mpitazana dia toa tohina mafy toy ny soavaly mando izy ireo.
Araka ny The Mirror, ilay tompony, Darla Anderson — izay hita ao amin'ny horonan-tsary — dia milaza fa tsy misy fanazavana hafa afa-tsy matoatoa satria hitan'ny masony daholo ny zava-drehetra.
"Tsaroako fa nijery ny pint aho ary avy eo dia nianjera fotsiny, izahay telo na efatra ihany no tao amin'ny pub tamin'izany fotoana izany ka tsy misy olona nandondona azy, hoy izy. SunderlandEcho, “Tsy hitako izay fanazavana mitombina ny amin'ny antony nahatonga an'izany, tsy mino izany ny mpanjifanay rehetra.”
Raha ny marina, nilaza i Darla fa nisy mpandinika ara-panahy iray tonga tao amin'ny toeram-pivarotany iray andro monja talohan'ny nampitandremana azy fa misy fanahy.
Mba hanamafisana kokoa ny raharaha, taorian'ny nandefasan'i Darla ilay horonan-tsary tao amin'ny media sosialy, nifandray taminy ilay tompony teo aloha ary nilaza fa rehefa tompon'ilay orinasa izy dia hisy zavatra hafahafa hanjo azy koa, "ny solomaso poakaty tsy misy dikany dia hianjera avy eny amin'ny bar fa tsy nanana izy. CCTV hisambotra azy,” hoy i Darla nanampy.
Misalasala ny mpanjifa misotro labiera fa tsy inona fa siansa eo am-piasana io hetsika io. Mino izy fa ny vera miaraka amin'ny gravity no tompon'andraikitra amin'ny fanonganana. Na izany aza, mbola misokatra hatrany i Darla amin'ny hevitra fa misy matoatoa manenjika ny pub taloha.
Saingy, ampahafantaro anay ny hevitrao mpamaky. Alefaso ao amin'ny fanehoan-kevitra.
Ho an'ny tantara paranormal hafa voarakitra amin'ny kasety, vakio ny Watch as Onja matoatoa avy ao anaty vatam-paty alohan'ny fandevenana.